Golaha Wakiillada oo aqlabiyad ku ansixiyey xukuumadda cusub ee Puntland – Kalfadhi
Golaha Wakiillada oo aqlabiyad ku ansixiyey xukuumadda cusub ee Puntland
Baarlamanka Puntland ayaa maanta si buuxda codka kalsoonida u siiyay golaha wasiiradda cusub ee madaxweynuhu magcaabay toddobaadkii hore. Waxay ka kooban yihiin 48 wasiir, wasiir xigeeno iyo wasiir dowle
Xildhibaanada golaha fadhiyay oo ahaa 63 mudane ayaa si buuxda codka kalsoonida u siiyay xukuumadda, saddex mudane ayaa maqnaa.
Kulanka ansixinta waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulahi Deni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash.
Mudo ka badan 5 saac ayaa goluhu fadhiyay oo dhegaysanayay khudbadaha wasiiradda, wasiir xigeenada iyo wasiir dowlayaasha cusub ee Puntland oo ka warbixinayay taariikhdooda shaqo, waayo-aragnimadooda iyo sida ay doonayaan in ay u shaqeeyaan.
Docda kale, golaha wakiilladu waxay aqlabiyad ku ansixiyeen qorshaha shaqo ee xukuumadda mudada shanta sano ah ee ay jirto.
Baarlamanka oo ku jira kalfadhiga 43aad ayaa maanta lahaa kulankiisii 19naad, kadib mudo shan cisho ah oo ay fasax kooban ku maqnaayeen.
Wasaaradda Qorsheynta: Xildhibaannada BFS ugu jira ayaa Somaliland ku matali doona Qorshaha Hormarinta Qaranka
Xildhibaan uga digay Madaxweyne Farmaajo inuu ku fekero "Muddo Kororsi"